အကာအကွယ်တွေအပြည့်နဲ့ ဆေးရုံမှာတစ်ဆောင်နဲ့တစ်ဆောင်ကူးရင်း ပင်ပန်းနေပေမယ့်လည်း အပြုံးမပျက်ရှာတဲ့ ဒေါက်တာမလေး ပိုးမမှီသာ - Cele Connections
လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားထားတဲ့ ပိုးမမှီသာက ဟောက်ဆာဂျင် ဆရာဝန်မလေးအဖြစ် သူမတာဝန်ကျရာ ဆေးရုံတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေလျက်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း ပိုးမမှီသာက တစ်ကိုယ်လုံး အကာအကွယ်တွေအပြည့်ဝတ်ပြီး ဆေးရုံမှာတစ်ဆောင်နဲ့တစ်ဆောင်ကူးရင်း ပင်ပန်းနေပေမယ့်လည်း အပြုံးမပျက်ရှာပဲ “Those most hours of my day whenamask covers my whole face !! တစ်ဆောင်မှ တစ်ဆောင်ကို ဆေးပြေးထိုးစဉ်တစ်ဖြတ်တစ်ကတ် 😅” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို မျှဝေပေးလာပါတယ်။
ပိုးမမှီသာကတော့ သူမတာဝန်ကျရာ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရင်း တစ်နေ့တာကို ဖြတ်သန်းနေလျက်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဆရာဝန် မင်းသမီးလေး ပိုးမမှီသာကို ဒီထက်မက ပိုချစ်ပြီး ပိုအားပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အကာအကှယျတှအေပွညျ့နဲ့ ဆေးရုံမှာတဈဆောငျနဲ့တဈဆောငျကူးရငျး ပငျပနျးနပေမေယျ့လညျး အပွုံးမပကျြရှာတဲ့ ဒေါကျတာမလေး ပိုးမမှီသာ
လကျရှိမှာ အနုပညာအလုပျတှကေို ရပျနားထားတဲ့ ပိုးမမှီသာက ဟောကျဆာဂငျြ ဆရာဝနျမလေးအဖွဈ သူမတာဝနျကရြာ ဆေးရုံတှမှော တာဝနျထမျးဆောငျနလေကျြရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာလညျး ပိုးမမှီသာက တဈကိုယျလုံး အကာအကှယျတှအေပွညျ့ဝတျပွီး ဆေးရုံမှာတဈဆောငျနဲ့တဈဆောငျကူးရငျး ပငျပနျးနပေမေယျ့လညျး အပွုံးမပကျြရှာပဲ “Those most hours of my day whenamask covers my whole face !! တဈဆောငျမှ တဈဆောငျကို ဆေးပွေးထိုးစဉျတဈဖွတျတဈကတျ 😅” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ပုံရိပျလေးကို မြှဝပေေးလာပါတယျ။
ပိုးမမှီသာကတော့ သူမတာဝနျကရြာ ရနျကုနျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးမှာ တာဝနျတှကေို ထမျးဆောငျရငျး တဈနတေ့ာကို ဖွတျသနျးနလေကျြရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ဆရာဝနျ မငျးသမီးလေး ပိုးမမှီသာကို ဒီထကျမက ပိုခဈြပွီး ပိုအားပေးကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
သည်းခံလွန်းတဲ့ ခင်ပွန်းအပေါ် ကိုယ်တိုင်အပြစ်တင်မိပြီး ပြန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု